बाबुराम ढकाल आइतबार, जेठ १८, २०७७ मा प्रकाशित
चर्चित व्यापारी मोहन गोपाल खेतानले एउटा अन्तरवार्ताको क्रममा मसंग भनेका थिएः
जुन देशका नेताहरुले व्यापार र व्यापारीले राजनीति गर्छन् । त्यो देशको भविश्य अन्धकारमय हुन्छ । नेपालमा पनि नेताले व्यापार र व्यापारीले राजनीति गर्न थालेका छन् । त्यसैले नेपालको विकास सजिलो छैन । (त्यो अन्तरवार्ता २०५८ सालको कुनै अंकमा दृष्टि साप्ताहिकमा छापिएको छ)
समयक्रममा उनका आफ्नै छोरा राजेन्द्र खेतान व्यापारबाट राजनीतिमा आए, सांसद बने । अचेल दुवै क्षेत्रबाट पलायन जस्तै भएका छन् । व्यवसायिक संघसंस्थाहरुमा समेत उनको उपस्थिति लगभग सून्य छ ।
उनी मात्र होइन, नेता बनेका धेरै व्यापारीहरुको नियती उनको जस्तै छ ।
यता, नेताहरु भने धमाधम व्यापार गर्दैछन् । र, त्यसले राजनीतिलाई ‘धमिलो’ बनाइरहेको छ । पछिल्लो समय त्यसलाई धमिलो बनाइरहेको छ—सांसद व्यापार कोषले ।
जसरी हाम्रो न्वारनको नाम र चलन चल्तीको नाम फरक हुन्छ । धेरै जनाले त आफ्नो न्वारनको नाम भन्न पनि चाहांदैनन् । ठीक त्यस्तै महामहिम अर्थमन्त्री र सांसदहरुले भन्न नचाहेर मात्रै हो, अहिले निकै चल्तीमा रहेको सांसद विकास कोषको ‘न्वारनको नाम’ ‘सांसद व्यापार कोष’ हो । अर्थात सांसदलाई व्यापार गर्न सरकारले बनाइदिएको कोष । त्यसैले सांसदहरुले आफू खुसी योजना छनौट गर्छन् । प्रकृया पुर्याए झैं गरी आफै ठेकेदार छनौट गर्छन र करोडौं रकम खर्च गर्छन् । भनिरहनु नपर्ला, त्यहां विकास होइन, व्यापारको कुरा बढी हुन्छ ।
त्यसैले सांसद विकास कोषबाट कुनै काम भएन, दुरुपयोग भनेर रोइलो मच्चाउनुको कुनै अर्थ छैन । व्यापार गर्न जन्माइएको कोषले नाफा घाटाको हिसाब नगरेर, व्यापार नगरेर विकासको काम गर्छ त ? विकासकै लागि भनेर खोलिएका संस्थाहरु, निकायहरु, कोषहरुको हालत थाहा पाउंदा पाउंदै ‘सांसद व्यापार कोष’ विकास गरेन भनेर प्रश्न उठाउनु जत्तिको मुर्खता के होला ? त्यसैले ढुक्क होउं, सांसद व्यापार कोषबाट व्यापार र नाफा घाटाको कुरा वाहेक अरु केही हुंदैन ।
विकासको गर्नको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु छदैंछन नी । व्यापार गर्नको लागि जन्माइएको ‘सांसद व्यापार कोष’ले ‘चुनाव लक्षित व्यापार’ गर्नु उसको ‘धर्म भित्रैको कुरा’ हो । यसपटक कोरोना महामारीले कर्मचारीको भत्ता कटौती भए जस्तै गरी सांसद व्यापार कोष पनि कटौती हुन्छ कि भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले त्यो आंट गर्नु भएन । किनकी उहांलाई पार्टीको संसदिय दल र संसद ‘फेस’ गर्नु पर्ने थियो, छ ।
र, अपवादमा वाहेक ९९ प्रतिशत सांसदहरुको माग ‘व्यापार कोष’ खारेज गरिनुहुंदैन, सकेसम्म बढाइनु पर्छ भन्ने नै रहंदै आएको छ ।
कुरो जे सुकै भए पनि मलाई चांही मोहन गोपाल खेतानको भविश्यवाणीले झस्काइरन्छ । सांच्चै नेता, सांसदहरु व्यापारी र व्यापारीहरुले नेतागिरी गर्न थालेपछि समृद्ध भएको देश विश्वमा कुनै छ र ?
नपत्याए हेर्नुस त—व्यापारी डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि विश्वको १ नं महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका कसरी धरमराउंदै छ ? र नेता नै राष्ट्रपति भएको देश चीनले कसरी विकासमा फड्को मार्दैछ ?
अर्थात कुरो क्लियर छ—जसले जे काम गर्छु भनेको छ, उस्ले त्यही काम पूर्ण दत्तचित्त भएर गर्ने हो भने बल्ल सफलता प्राप्त हुन्छ । देशको विकास हुन्छ । नेताको के कुरा गर्नु ? हाम्रोमा चांही सबै मान्छे सर्वज्ञानी, सर्वज्ञाता । नेताले राजनीति वाहेकअरु सबै काम गर्ने, व्यापारीले व्यापारवाहेक अरु काम गर्ने, डाक्टरले डाक्टरी वाहेक अरु सबै काम गर्ने, इन्जिनियर, शिक्षक, वकिल, पत्रकार सबैको हालत, त्यस्तै । आफ्नो ‘पेशागत काम’ वाहेक अरु सबै गर्ने ।
अनि परिणाम ! ! !
मलाई त मोहन गोपाल खेतानको भविष्यवाणीले झस्काइरहन्छ हजुर ।